Groupe laisoa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Groupe laisoa
Azo atao ve ny mampitombo karaoty tsy misy fanangonana ary inona no atao?
Any amin'ny faritra avaratra, dia tena mampidi-doza ny famafazana voan-kafe avy hatrany, satria mety hijanona ny hafanana. Noho izany antony izany, ny karba dia mitombo amin'ny karazan-kazo izay mitaky ny fisafidianana. Ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba hanapahana ny lozika ao an-trano, inona no hanomezany antsika ary amin'ny tranga inona no tsy takiana.
Mampitombo ny fako ao amin'ny zaridainanay izahay: fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana
Ahoana no hampitombo ny karaoty ao amin'ny zaridaina iray misokatra: Fikarakarana, fambolena sy fikarakarana ny zavamaniry Ny vilia fandriana dia orkide ho an'ny sakafo maoderina maro. Ny antony mahatonga an'io lazaina io dia ao amin'ny zotra tsy azo zaraina an'ity zavamaniry ity, ary koa ny toetra mahasoa ananany.
Ny momba ny fikarakarana sy ny fambolena ny broccoli
Ny karajin'ny broccoli dia efa fantatra hatramin'izao ny toetra voajanahariny. Ny Broccoli dia asaina ho an'ny olona voan'ny diabeta sy olona voan'ny aretim-po, ary betsaka ny asidra folie sy fibre dia mahatonga azy ho vokatra azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka. Ny fomba hanamboarana ny zana-ketso alohan'ny hambolena azy, ny zavatra voalohany tokony hanapa-kevitra amin'ny safidy isan-karazany, dia avy eo manaraka ny fanomanana ny voan'ny broccoli.
Inona no atao hoe voanio savoy
Maro amin'ireo mpizaha tany izay vahiny (any Eoropa, Etazonia, Kanada) no manamarika fa ny lozika any amin'ny trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny (amin'ny sakafo isan-karazany, salady sy cakes) dia mangarangarana kokoa, mamy sy mamy kokoa noho ny anay. Ny teboka eto dia tsy ny fahaiza-manaon'ny cooks, fa ny fitiavan-dry zareo Savoy karaoty eto. Mampalahelo fa tsy malaza eto ny karajin'ny savoy eto, na dia lehibe aza ny tombontsoa azony ka mendrika ny lohatenin'ny "mpanjakavavin'ny legioma".
Ahoana no hampitombo ny kisoa ao amin'ny zaridainanao
Koba - ny fanalahidin'ny vatana mahasalama. Ary amin'izao fotoana izao dia hianatra ny fomba hambolena voanio karaoke avy amin'ny voa, ny karazana fikarakarana legioma ilaina sy ny fomba hitazonana izany ao an-trano. Inona no atao hoe kalaokely ary ahoana no ilàna ny Kauze Kale - karazana karaoty, karazana zaridaina iray, manana toetra mahasoa. Matetika fantatra amin'ny hoe grunkol na braunkol.
Ahoana no fomba itomboan'ny zana-katsaka?
Ny karaoty fotsy dia singa manan-danja amin'ny sakafo mahavelona sy voalanjalanja ny olona tsirairay. Io legioma io dia nahazo ny lazany voalohany indrindra noho ny zava-misy izay ahitana karazana tranga mahasoa sy vitamina (A, B1, B2, C). Noho izany, tsy mahagaga raha ny lozam-pandriana dia vahiny tsy tapaka eo am-pandrian'ny mponina amin'ny fahavaratra.
Karazana chou chou chou: torohevitra momba ny fambolena sy fiahiana
Ny chauk chi chai chi chai dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra amin'ny loha any Azia Atsinanana. Noho ny firoboroboana tsara sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny tany sy ny sakafo mahavelona dia maro ny mpamboly vary eto amin'ny firenentsika no nanomboka nanamboarana an'io karazana varimbazaha io. Hiresaka momba ny tsiambaratelon'ny fambolena mety sy ny fikarakarana ny choix ao amin'ny lahatsoratra isika.
Fambolena karazam-boankazo amin'ny fambolena karazany: famafazana voa sy karakaraina eny an-tsaha
Lozam-boalavo, voanio karaoke, lava-dranomandry, "Red" rosiana, alemana, holandey, Brauncol (Bruncol na Grünkol) - ireo rehetra ireo dia anarana hafa ho an'ny karazana karazana karazana mahavelona, ​​izay tena mahasoa, izay tsy mitaky fikarakarana manokana, mandefitra mora foana ny hafanana ary mety hitombo ho toy ny maharitra.
Ny fomba hanamboarana broccoli eny an-tsaha
Ao amin'ny latabay, ny bokôoli dia nanomboka namboly ary nihinana tsy ela. Na izany aza, mihamalaza haingana be io legioma io, izay mitoetra ao amin'ny ilany, ny tsirony ary ny voka-bary kalorie. Ho an'ny tombony azony dia azonao atao ny manampy ny fahatsorana amin'ny fikarakarana. Andeha hojerentsika ny fomba hitomboan'ny broccoli ao amin'ny zaridaina.
Mila maka ny ravin'oliva ve aho?
Ny kobay dia legioma malaza amin'ny habetsahan'ny mponina amin'ny fahavaratra. Hodinihintsika ao amin'ny lahatsorantsika ny iray amin'ireo fanontaniana izay manahirana ny mpamboly legioma maro: ilaina ve ny maka ny ravin-tsavony ambany? Inona no lazain'ny mpikarakara zaridaina Cabbage - iray amin'ireo voankazo mahavokatra ao amin'ny zaridaina, satria matetika ireo zana-maty no maty amin'ny tany noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny sakafo.
Ny fitsipiky ny fitsangatsanganana ny laisoa eny an-kalamanjana
Saika ny mpamboly rehetra no mitombo ao amin'ny zaridaina. Na izany aza, mitaky fikarakarana manokana io legioma io, indrindra fa rehefa manondraka. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hamaritra ny fomba hanondrahana ny karaoty rehefa mamboly amin'ny tany mba hahazoana vokatra manitra sy matsiro. Toe-draharaha momba ny fitomboan'ny rajako Ny tavy mitombo Ny tavy mitombo Ny asa lehibe dia sarotra.
Fitsipika fototra sy fitsipika momba ny fanangonam-bozaka eny an-tsaha
Ny kobay dia iray amin'ireo vokatra legioma lehibe indrindra. Nambolena tany amin'ny firenena rehetra maneran-tany izy io mba hisian'ny tsimokaretina, ary koa ho toy ny orinasa medikaly sy zavamaniry. Ny fisian'ny zaridaina legioma afaka atao raha tsy misy alokaloka dia maneho fa tsy sarotra ny mikarakara azy. Na izany aza, ny fijinjana be dia be dia tsy afaka mahazo afa-tsy amin'ny fandaminana ny fandroana sy ny fambolena.
Karazana fanomezana karaoty: famaritana, sary, fambolena, fiahiana
Ny kobay dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra. Fantatra ny ankamaroan'ny karazany, androany isika dia hiresaka momba ny karazana Podarok, fantatra any amin'ny faritanintsika. Famaritana sy tarehin-tsakafo Ny vary dia karazana voamaina fotsy mandritra ny vanin-taona. Sambany no nofaritana tao amin'ny rejisitra tamin'ny taona 1961 ny varotra, nahazoana alalana ara-barotra.
Ny fomba hikarakarana ny karaoty rehefa mamboly amin'ny tany malalaka
Maro ny mpikarakara zaridaina, ny mpamboly dia manisy fiheverana manokana amin'ny fambolena legioma, saingy tsy fantany ny fomba hikarakarana tsara ny karaoty eny an-kalamanjana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fototry ny fikarakarana an'io legioma mahasoa io isika, ary manome toro-hevitra momba ny fanafarana ny tany ho an'io zavamaniry io. Manome ny fandroana marina Ny teboka fototra amin'ny fikarakarana ny legioma dia ny fandroahana azy.
Reniranon'ny koba: toetra mampiavaka ny karazana vary, fambolena sy fiahiana
Androany, mitombo ny karba ao anatin'ireo trano fonenan'ny mponin'ny Rosiana. Ity vokatra ity dia nalaza tamin'ny endriny rehetra: mena, mofomamy, mena, maka aina, marin-kisoa, ao anaty pizza sy legioma. Ary noho ny antony tsara, satria manana legioma be dia be izany legioma izany. Ny karazana lolo fotsy mahazatra indrindra dia antsoina hoe "Voninahitra", famaritana ny fambolena sy fiahiana eo amin'ny sehatra misokatra izay omenay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Fomba hisafidianana ny karazana varimbazaha tsara indrindra ho an'ny fanangonana sy fanangonana
Ny voanio sauerkraut na sira no sakafo tsotra indrindra izay manatrika matetika ny sakafo. Raha vao jerena dia mora ny manomana izany, ary marina izany, ny tena zava-dehibe dia ny mahafantatra tsiambaratelo sasany izay hahatonga ity zava-mahadomelina ity tena mahasalama sy mahasoa. Ny iray amin'ireo tsiron-tsakafo dia ny karazana voaaro tsara ho an'ny sira, ary inona no karazana azo atao amin'izany, hijery ity lahatsoratra ity isika.
"Dzhetodor" kay: ny toetra, ny fambolena agrotechnology
Ny voankazo rehetra dia ny legioma no manana ny toerana voalohany amin'ny sakafo ara-tsakafo. Mihinana mena izy ireo, ampiana sakafo mahavelona, ​​ary voaova amin'ny salady. Ny legioma dia mizara ho boka sy ny fakany, melons, voankazo, voatabiha. Ny kolontsaina kara, izay an'ny fianakaviana Cabbage, dia miavaka amin'ny tarika misaraka.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Groupe laisoa